I-Mastitis kumama onesiko - iimpawu
I-Mastitis - inkxalabo eqhelekileyo yexesha lokuhamba emva, lwenzeka ngenxa yokusuleleka kwintsholongwane yemvelo evela kwindalo ngeengxobo okanye kwelinye ukuvuvukala kugxininiswe kwi-lymphatic okanye i-milk ducts. Nangona kunjalo, kwinkqubo yokuvuvukala yokufumana umlingisi oqaqambileyo, ezinye iibhaktheriya aziwanelanga, kodwa izimo ezifanelekileyo zokuhlala kwazo zifunekayo. Njengoko akunakwenzeka, ngendlela, ubumbele obisi bubulungele oku.
I-Lactostasis - okubizwa ngokuba yi- stagnation yobisi kwindlela yokwelapha, iyaqondakala kakuhle kumama oselula. Ngokujonga kwenkqubo yokutya engatshintshiyo kunye nokungabikho kwexesha kunye namava okubonisa ubisi obuqhubekayo, okwenza indawo ehle kakhulu yokukhula nokuveliswa kweebhaktheriya. Ukuba ixesha lingathatyathwa ukuba lisuswe, kungakapheli iintsuku eziyi-3-4 umama onesihlengikazi unokufumana iimpawu zokuqala zesifo se-mastitis.
Iimpawu ze-mastitis ngexesha lokutya
Njengomthetho, iimpawu ze-mastitis kumfazi ongumhlengikazi azikwazi ukuhlala zingaboni. Okokuqala, unina onomntwana onomhlengikazi uyaphawula intlungu esifubeni sakhe, umkhuhlane, ukupompa okunzima, okuhambelana nesifo sosizi esinamandla, yonke le miqondiso ibonisa isigaba sokuqala se-mastitis. Emva koko, ngokungabikho kwonyango, imeko yowesifazane ibonakala ngakumbi:
Kwi-gland evuthayo, ukuxilongwa okuncinci kuvezwa, ulusu phantsi kwelo lube lubomvu kwaye lushushu kumgca;
ukupompoza kunzima kakhulu okanye kungenakwenzeka;
Zonke ezi zihlandlo zihamba kunye nobuthakathaka obuninzi, izibilini, intloko;
ukuba i-mastitis ihlambulukile, ngoko iimpawu zabo koomama abangabongikazi zikwabiwa kwepus kwi-nipple, i-palpitations, i-lymph nodes eyandisiweyo kunye ne-cyanotic skin tone endaweni ye-pus accumulation.
Kwimeko yokuqala yokusola nge- mastitis ngexesha lokusondla , umfazi kufuneka afune uncedo lwezokwelapha, njengoko esi sifo siphepha ingozi kuphela ekuphumeleleni ukuncelisa, kodwa kunye nempilo kamama nomntwana ngokubanzi.
Ngendlela efanelekileyo ukulungiselela ukutya okuxubekileyo?
Ungalususa njani ubisi lwebele?
I-tea nge-mint ngelixa belisa
Ngaba kunokwenzeka ukondla ukuncelisa?
Yintoni enokuyidla umama onomhlengikazi ngenyanga yokuqala?
Herpes kumama onesiko
Indlela yokuyeka ukuncelisa - isilumko seengcebiso
Ngaba ndingamncelisa i-fruit from my dried fruit?
I-Fennel kumama oongikazi
Ubisi luvela nini emva kokuziswa?
Ukutyunjwa kwiintsana ezisanda kuzalwa ngokutya okufakelwayo - yintoni oyenzayo?
Ibhasikidi yezandla zelinen
Ukuhlambalaza kumabhinqa omntwana
Keanu Reeves kunye nentombazana yakhe 2015
I-Laurent Pie kunye namaMushroom
UWan West uthetha nge-liposuction kunye nokuxhomekeka kwi-opiates
I-Apricot - enhle kwaye embi
I-Street Fashion - Ubusika 2017
Ezili-10 ezidumileyo zeCinderellas, ezazineemveli neenkosana zangempela
I-Fennel - iimpawu zonyango kunye nokuchasene
Visa ukuya eArabic eRussia
Indlela yokukrazula iindawo zokudala?
Ngumhla wemijikelezo eyenzekayo?
Cavinton - ezifanayo
I-Sauce ye shish kebab ekhaya